Ny tale jeneralin'ny OMS dia niresaka tamin'ny minisitry ny fahasalamana sy ny fitantanam-bola G20
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny tale jeneralin'ny OMS dia niresaka tamin'ny minisitry ny fahasalamana sy ny fitantanam-bola G20
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny Tale jeneralin'ny OMS dia nanao lahateny tamin'ny fivorian'ny G20 Minisitry ny Fahasalamana sy ny Vola.
Na dia miady amin'ny fampitsaharana ity areti-mifindra ity aza isika, dia tsy maintsy mianatra ny lesona ampianariny antsika ary miomana amin'ny manaraka.
Entin'ny variana Delta COVID-19, dia mitombo indray ny tranga sy ny fahafatesana eran-tany.
Na dia mamonjy aina aza ny vaksiny COVID-19 dia tsy manakana ny fifindran'ny otrikaretina izy ireo.
Ny 36% amin'ny mponina eran-tany dia efa vita vaksiny tanteraka. Any Afrika anefa dia 6% monja izany.
Lahatsoratra fanokafana nataon'ny tale jeneralin'ny OMS tamin'ny fivorian'ny minisitry ny fahasalamana sy ny fitantanam-bola G20 - 29 Oktobra 2021:
Andriamatoa Daniele Franco,
Andriamatoa Roberto Speranza,
Misaotra anao tamin'ny fahafahana hiaraka aminao androany.
Azoko antoka fa tamin'ny voalohany nomanina ity fivoriana ity dia nanantena izahay fa ho tapitra ny valan'aretina. Io dia tsy.
Entin'ny variana Delta, mitombo indray eran'izao tontolo izao ny tranga sy ny fahafatesana, anisan'izany ny any amin'ny firenenao.
Na dia mamonjy aina aza ny vaksiny dia tsy mampitsahatra ny fifindran'izy ireo, izany no antony tsy maintsy hanohizan'ny firenena tsirairay ny fitaovana rehetra, ao anatin'izany ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-tsosialy mifanaraka amin'izany, miaraka amin'ny fitsapana, fitsaboana ary vaksiny.
omaly, WHO ary ny mpiara-miombon'antoka dia namoaka ny drafitra stratejika sy tetibola vaovao ho an'ny fidirana amin'ny Covid-19 Tools Accelerator, miaraka amin'ny fangatahana 23.4 miliara dolara amerikana mba hahazoana antoka fa mandeha any amin'izay ilana azy indrindra ny fitsapana, ny fitsaboana ary ny vaksiny.
Misaotra noho ny fanekena ny maha zava-dehibe ny WHONy tanjona dia ny hanao vaksiny farafahakeliny 40 isan-jaton'ny mponina amin'ny firenena rehetra amin'ny faran'ny taona 2021, ary 70 isan-jato amin'ny tapaky ny taona 2022.
Mba hahatratrarana ny tanjonay 40% dia mila fatra 550 tapitrisa fanampiny izahay. Manodidina ny 10 andro eo ho eo ny famokarana. Araka ny lazain'ny namako Gordon Brown, mihoatra ny antsasany io isa io dia mipetraka tsy ampiasaina any amin'ny firenenao, ary azo apetraka avy hatrany.
Marina fa misy vondrona kely firenena manana fetrany, izay ezahinay hovahana.
Saingy ho an'ny ankamaroan'ny firenena dia resaka tsy ampy famatsiana fotsiny izany.